NAB Show News | 2020 NAB Show Wada shaqeeyaha Saxaafadda iyo Soosaaraha NAB Show LIVE - Bogga 973 - 2020 NAB Show News: Live Streaming, Podcasting, Injineer Broadcast, TV & Radio Teknolojiyada iyo Waxsoosaarka Soo Saarka. NAB Show 2020.
Ururka Mareykanka ee Fineyaasha Cinematographers (ASC) ayaa magacaabay sideed filim oo muuqaal ah oo ka socda tiyaatarka The ...
Marka ay timaado qalabka wax lagu qoro / madadaalada, hal-abuurnimada waa shey muhiim u ah c ...
Haddii aad tahay hal-abuur isla markaana meheradda / maqalka / raadiyaha idaacadda ay tahay habka aad ku wada xidhiidho, ...
Safarka hal abuur kasta, gaar ahaan mid ka shaqeynaya inuu ku dhex baxo raadiyaha / madadaalada ee ...
Xilligi lixaad iyo ugu dambayn ee riwaayadaha siyaasadeed ee la dhacay, Xoghaynta Madam wuxuu ku bilaabay ba ...
Siday Cooke miniS4 / i Lenses caawisay Abaalmarin guuleysata DP Capture Nature's Beauty
Dabeecadu dhinacyo badan ayey ku leedahay. Mid ka mid ah astaamaha lagu raaxeysto ayaa ah xayawaannada duurjoogta ah ee sidaas ...
Maanta, in kasta oo badeecad naadir ah ay tahay, hal-abuurnimadu waa lama huraan, gaar ahaan markay timaaddo xi ...
Qeybta farshaxanimadooda, jilaa walba, iyadoon loo eegaynin nooca filim / televisio ...
Xilligan Kirismaska ​​wuxuu leeyahay qof walba oo ku dabaaldegaya qaab-fasaxeed! Xitaa xarumaha caafimadka sare ee caliber ...
Qalabka xalka qalabka iyo softiweerku wuxuu wax yeeleeyaa mashiinnada AI, ee farshaxanka casriga ah ee loo yaqaan 'LTO8-teknoolojiyada' data qaabka mLogic a ...
S: Waa maxay doorkaaga imminka jira maxaase ku jira? A: Waxaan ahay injineer maqal oo madax-bannaan iyo isku-darka, m ...
Waqtigaan la joogo, waxaan fursad u heleynaa booska Kaaliyaha wax soosaarka Qeybta Waqtiga ee Kooxdayada Wax soo Saarka Ganacsiga.Taabo u qaadashada booskan waxaa ka mid ah: - Studio-haynta iyo sameynta nalalka garoonka- Studio iyo qolka maqalka - Final Cut Pro final-soosaarida dib-u-buuxinta Shuruudaha Sharuudaha jagadaas waxaa ka mid ah: - Aqoonta Howlgalka Muuqaalka Fiidiyowga ee HD - Maareynta xirfadaha maamulka iyo kumbuyuutarka - Faham adag oo ku saabsan hanaanka wax soosaarka telefishanka - Waa in ay awood u yeeshaan in ay gacan ka gaystaan ​​oo ay la shaqeeyaan macaamiisha ganacsiga iyo kartida kaameradda-waa in ay diyaar ahaadaan shaqada Talaadada iyo Arbacooyinka inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah
PAs Ayaa Ugu Baahan Las Vegas Bandhigga Tartanka.
Iyaga oo si dhaw ula shaqeynaya isla markaana si toos ah ugu wargalinaya Maareeyaha Wax soosaarka, isla markaana leh isdhaxgal maalinle ah oo lala yeesho naqshadeynta iyo shaqaalaha farsamada ee bandhigyo iyo mashruucyo kala duwan, masuuliyada koowaad ee howshaani waxay ka caawin doontaa Maareeyaha Wax soosaarka ururka iyo dayactirka ilaha farsamada iyo meelaha keydinta, sidoo kale la shaqeynta culeyska gudaha, ordaya iyo garaaca kooxaha wada waaxaha oo dhan. Waxsoosaarka Waxsoosaarka waa goob gacanta lagu hayo isla markaana internedka waxaa laga filayaa inuu kaqeyb qaado dhamaan qeybaha wax soo saarka - muuqaalka, iftiinka, codka, fiidiyowga, maareynta masraxa, dharka, iyo howlaha kale ee imaan kara ...
Comments Off Maareeyaha Wax Soo Saarka Tifaftiraha
Ka caawi dabagalka qorshaha maalinlaha ah adiga oo ka codsanaya shaandhaynta loo baahan yahay tifaftirayaasha, cilmi baarista ama koobiga, ka caawinta dhaqaajinta hubinta farshaxanka iyada oo loo marayo geedi socodka ansixinta iyo dhibaatooyinka dhibaatooyinka ee haynta wax soo saarka adoo kaashanaya farshaxanka, tafatirka, sawir, baarista iyo waaxaha nuqullada Abuur dossiers loogu talagalay dhammaan sheekooyinka Mawduuc kasta, ka eeg Woodwing si loo helo magacyo ku habboon oo loogu talo galay daah-furka iyo faylalka qoraalka ah Kala-soco sheekooyinka marxalad kasta oo hawsha soo-saarka ah iyada oo la abuurayo laguna cusboonaysiinayo shaqo-u-helista dhammaan sheekooyinka mawduuc kasta. Ku dar dhammaan isbeddelada Mockup-ka. Dib u dalbo haddii loo baahdo. Joogtee meelaha wax soo saarka ee Intranet adoo ku dhajinaya dhammaan howlo maalmeedka iyo jees jeeska usbuuc kasta ...
Comments Off on Manager Maarso
Ma waxaad tahay hal-abuur, dhiirrigelin, soo-saare khibrad leh oo diyaar u ah inuu u gudbo jago maamul? Haddii ay sidaas tahay, ka dib WXLV iyo WMYV ee Greensboro-High Point-Winston Salem waxay jeclaan lahaayeen inay kula hadlaan. Waxaan u baahanahay qof laf dhabar u ah hal abuurka iyo fikradaha hal abuurka leh ee ku maarayn kara dadaalka waaxdayada wax soosaarka ee jawi xawli ku dheehan yahay, jawi ay ku egtahay waqtiga abuurista iyo soo saarida ganacsiyo iyo barnaamijyo wax ku ool ah macaamiisheenna kaas oo qaadi doona dareenka aragtida. Shan sano oo ah xirfadaha maaraynta ee jiheynta, soo saarista iyo qorista ayaa la door bidaa.
Comments Off on Injineerka Injineerka
Injineerada Encoding waxay mas'uul ka yihiin dhamaan qaybaha xirmada toosinta tooska ah ee howlaha tooska ah, howlgalka, iyo shaqo joojinta kahor, inta lagu gudajiro, iyo munaasabada ka dib, siday u kala horreeyaan. Injineerka Encoding wuxuu la shaqeyn doonaa soosaarayaasha Livestream iyo Soosaarayaasha Kaamirada si loo hubiyo habsami u socodka tooska ah ee baahin kasta oo gaar ah. Injineerka dejinta ayaa kaligiis la shaqeyn kara ama shaqaale ka weyn. Musharaxa ku habboon wuxuu waayo-aragnimo u leeyahay hawlgallada fiidiyowga tooska ah iyo waxsoosaarka tooska ah ee waxsoosaarka, waana inay awoodaan inay shaqeeyaan saacado dheer oo ay weheliso jadwalka maalin iyo habeenba. Codsadeyaashu waa inay noqdaan kuwo si faahfaahsan u jiheysan oo leh aqoon isgaarsiin iyo xirfado abaabul. Is-dhiirigelin ...
Comments Off on Director Production
Abuurista; naqshadaha; wuxuuna fuliyaa waxsoosaarka ganacsiga ee guriga dhexdiisa asal ahaan wuxuu ka kooban yahay nuxurka asalka ah iyadoo kuxiran mala awaalka iyo kartida shaqaalaha. Waxay qaadataa ganacsi laga bilaabo fikradda illaa wax soosaarka ugu dambeeya. Xirfadaha Xaddidan ee xirfadaha leh waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn: In la sameeyo wax soo saar ganacsi oo gudaha ah oo ay ka mid yihiin duubitaan, cod-bixin, isku-darka, magac-u-dhigga iyo kaydinta xayeysiiska. U qaybi wax soo saarka ganacsiga si ay u taageeraan shaqaalaha. Taageero hal abuur leh waaxda wax iibinta ee laxiriirta wax soosaarka ganacsiga oo ay kujirto qoraal koobi ganacsi ah hadba sida loogu baahdo. Lasoco oo sax sax warbixinada ganacsiga ee maalinlaha ah. Howlgalka qalabka maqalka ee dhijitaalka ah. Waa inuu noqdaa mid si faahfaahsan u jiheysan kuna shaqeeyn kara jawi ay lagama maarmaanka tahay in waqtiga kulanka laqabto
Isuduwaha Dhiirigelinta / Injineerka
Comments Off Isuduwaha Dhiirigelinta / Injineerka
CBS RADIO, waa qayb ka mid ah shirkadaha CBS, waa mid ka mid ah shirkadaha waaweeyn ee raadiyaha raadiyaha ee dalka Mareykanka, oo leh saldhigyo daboolaya wararka, cayaaraha, hadalka, dhagaxa, waddanka, kuwa ugu sareeya ee 40, hits classic, iyo qaababka magaalooyinka kale. Ku dhowaad ku dhawaad ​​70 million dhagaystayaasha dhagaystayaasha ah ee todobaadlaha ah, qeybta ayaa ka shaqeeya xarumaha raadiyaha 126 ee ku yaal suuqyada 27, oo ay ku jiraan dhammaan 10. Isku-darka guud ee barnaamijyada idaacadaha ayaa loogu talagalay inay ku haboonaato habka gaarka ah ee idaacadda oo u adeega bulshada degaanka. Carson Daly, Boomer Esiason iyo Craig Carton, Mike Francesa, Danny Bonaduce, Kevin iyo Bean iyo Ryan Cameron ...
Kalkaaliyaha Aaladda / Wax soosaarka
Comments Off kaaliye maqal / soosaar
Maaddaama aan nahay koox yar, musharraxa u qalma wuxuu noqon doonaa koox koox si toosa ugu hagta, lehna anshax shaqo oo adag iyo hal abuurnimo xallinta xirfadaha. Intaas waxaa sii dheer, murashaxani wuxuu noqon doonaa is-bilaawsi, awood u leh inuu si dhakhso leh ula qabsado jawiga shaqo ee cusub waana inuu si fiican ugu shaqeeyaa cadaadis, isaga oo leh awood uu ku maareeyo hawlo badan si uu ula kulmo waqtiga loo qabtay. Tani waxay u noqon laheyd fursad sagxad sagxad leh murashaxa saxda ah ee leh karti horumar deg deg ah. Xirfadaha Looga Baahan Yahay: - Khibrad duubis Studio - Khibrad soosaarid - Khibrad Sare / Isku-Darka Xirfadaha - DAW Khibrad - Khibrad Laxirid - Aqoonta Qalabka Dibadda iyo Mikrofoonnada –Fahminta Feejignaanta Qulqulka Calaamadaha - ...
Ku shaqeynta adag shaqo adag oo akhlaaqeed leh Waxaa loo xilsaarey inuu qeyb ka noqdo bulshada iskaashiga ah yaqaanna sida loo isticmaalo ugu yaraan Cut Cut - Aqoon lasocda iyo qofkasta oo himilo u leh oo qaban kara howlaha kuna dhameysan kara isagoon u baahneyn xasuusin joogto ah.
Comments Off on Soo-saaraha wax soo saare
Filimka qalin jabinta ee USC (argagax / shaki) ayaa raadinaya naqshadeeye soosaar naxdin leh. Jadwalka toogashada: Dec 4- 11, 2013 ee LAPlease waxaa lagu dabaqayaa haddii aad tahay shakhsi hal abuur sare leh oo ku shaqeyn kara waqti go'an. Xiisaha loo qabo nooca filimka naxdinta leh ayaa ah mid lagu soo daray laakiin aan ahayn wax lagu guuleysto. In kasta oo ay tani tahay jago mushahar yar, waa fursad aad u weyn in lagu arko shaqadaada oo lagu arko noocyo badan oo filim ah, madaama aan qorsheynayno inaan ku tusno filimkan dabaaldegyo badan oo adduunka ah! Buundooyin iyo cunno ayaa sidoo kale la bixiyay.
Raadinta Kaalinta Wax-soo-saarka leh Karinta Kartidaada si aad u noqoto Qaybta Iskudhiga ah ee Telefishinka Taleefanka Ku-meel-gaarka ah / Shaqaalaha Ganacsiga. Raadinta Kalkaaliye Horumarinta Qoyska ah oo jecel inuu karsado! Waayo-aragnimadu ma aha mid muhiim u ah dabeecadda, hal-abuurnimada, iyo shakhsiyadda booskan dalbaday. Fursad aan loo baahneyn in ay ka shaqeeyaan dhinac ka mid ah shahaadada caanka ah ee caanka ah iyo dhammaan kooxdooda kaalin muhiim ah.
Isku-dubbaridid ​​arin xariir ah oo ku dhex mara kulannada xayeeysiinta iyo qaybta tifaftirkaUrurka adigu waxna ka beddel faahfaahinta daabacaadaha Studio-ga ah ee wax ku oolka ah iyo qiimaha wax ku oolka ahLa soocida iibka iyo qaybta tifaftirka inta lagu jiro hannaanka samaynta Dhibaatooyinka Gaadiidka Ganacsiga Ganacsiga Ganacsiga: Isku-dubarida macluumaadka macluumaadka adigoo isticmaalaya barnaamijka daabacaadda iyo Quad ARMManage Faahfaahinta alaabta sawirada ah ee khariidada xayeysiinta ee xayeysiinta ku habboon ee xayeysiisyada xayeysiisyada ku xayeysiis calaamadeynta bogagga xayaysiisyada ee DBL on line iyo In-Site2 + sanadlaha joornaalada daabacan (wargeyska ama khibradaha soo-saarka daabacan waa la aqbali karaa) Dardar galin, doonaya tijaabinta iyo sahaminta hababka cusub iyo tiknoolajiyada cusub Farsamooyinka maareyntaWaxbarashada wargeysyada farsamada wax soo saarka farsamadaDetail oriented, awood ...
Asal ahaan Agaasimaha Wax soosaarista Creative - Creative
Comments Off on Maareeyaha Wax Soo Saarka Hal abuurka - Hal abuur
At Netflix, waxaanu ku mashquulsanaynay abuurista nooca Original Content. Laga bilaabo Guriga Kaararka ee Lagu Horumariyo Orange-ga Orange waa New Black, kooxdayadu waxay u baahan tahay in ay isku-duwo si ay u keento jaantusyada adeegeena. Waxaan ubaahanahay qof jecel in uu ka shaqeyn karo kooxo hal abuur leh iyo farsamo. Qofka aan ku tiirsanaan karno si loo hubiyo in dhammaan qalabka hal-abuurka ah ee adeeggayaga si habboon loo faafiyo loona dilo Netflix Original kasta. Nagu saabsan: Kooxda Adeegyada Wax soosaarista ayaa ka mas'uul ah inay la shaqeeyaan lamaanayaasheenna munaasabadaha kala duwan si ay u helaan, ansixiyaan, naqshadeen, iyo u soo saaraan dhammaan qalabka hal-abuurka ah ee lagama maarmaanka u ah adeegga Netflix. Our ...
Maamulaha EDITOR / VIDEO MANAGER MANUFACTURER
Comments Off ee ku saabsan MAAMULKA MAAMULKA / VIDEO Production MANAGER
Doorka labada ah wuxuu ka kooban yahay maareynta wax soo saarka maalinlaha ah ee daabacaadda iyo daabacaadda majaladda, qorista, dejinta iyo farsamaynta sheekooyinka, maareynta wareegyada wax soo saarka, cusbooneysiinta website-yada iyo dirista waxyaabaha internetka maalin walba. Meelkani wuxuu sidoo kale ka caawin doonaa Agaasimaha Adeegyada Fiidiyowga leh qorshaha shaqada iyo jadwalka, maareynta hantida hindisaha ee muuqaalka, dukumiintiyada, miisaaniyeynta, maamulka warbaahinta bulshada iyo baahida isgaarsiinta gudaha iyo macaamilka. Musharaxa ugu fiican wuxuu leeyahay dabeecad wanaagsan oo u shaqeyn kara hawlo badan iyo khibrad qaar ka mid ah fiidiyowga HD iyo sidoo kale qaabeynta aan tooska ahayn iyo / ama dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa waa isku mid. Xirfadaha adag ee farsamaynta qoraalka iyo khibradaha tifaftirka ee ugu yaraan 3 waa waajib.
Kaaliyaha Waxsoosaarka, Iskuduwaha Shabakada
Comments Off dhanka Kaaliyaha Wax Soosaarka, Shabakada Esquire
Fahmee astaanta, iyo ka caawi sidii aad u soo dejin lahayd codka shabakada ee nolosha oo dhan dhammaan sheekooyinka hal-abuurka ah. Ka shaqee mashaariicda miisaaniyada iyo qiyaasaha: kor u qaadista hawada, isdhexgalka, sawirada suuq-geynta, miisaaniyada la kafaalo qaaday, internetka, OOH, raadiyaha, iyo bandhigyada iibka shabakadaha, iwm. Kaalmooyinka hawlaha kala duwan: gaabinta sawirada tallaalada iyo qaniinyada ugu fiican, raadinta guryaha martida ee sawirada iyo sawirrada kadibna ruqsadaha, iibsashada iyo raadinta shaashada, abaabulida waraaqaha waaxda waraaqaha iyo faylasha, iwm. sii deynta, la shaqeynta tifaftirayaasha ...
New York Magazine wuxuu raadiyaa Isuduwaha Wax-soosaarka si uu ula-socodsiiyo wax-soo-saarka xayasiiska iyo daabacaadda ee daabacaadda toddobaadlaha ah. Mas'uuliyadaha waxaa ka mid ah tahriibinta dhammaan faylasha daabacaadda ee loo diro bogga internetka ee joornaalka; xaqiijinaya in faahfaahinta faylka ay sax yihiin; hubinta in waxyaabaha la soo gudbiyay ay u dhigmaan amarrada tilmaamaha; iyo qalabka wax soo saarka ee daabacaadda iPad-ga, oo ay ku jiraan wax-qabadyada loo baahan yahay. Mawqifku wuxuu leeyahay mas'uuliyad isbedel ah oo abuuraya khariidada mashaakilka iyo taageeridda isbuucyada dhow habeenada jimcaha .- Xirfadaha habeynta ururada, diiradda, iyo feejignaanta si faahfaahsan; - Xirfadaha xirfadeysan ee dadka iyo awoodda ay u leeyihiin in ay iskaashadaan iskaashiga ...
Page 973 of 982«First...950960970«971972973974975»980...Last »